Wararkii U Dambeeyay Ee Xaalada Barlamaanka Soomaaliya Oo Wali Is Mari Waa Ka Taagan Yahay+Xaruntii Oo Ciidan La Wareegay
Wednesday 4th April 2018 17:06:21 in Wararka by Suuqa Hoose
Hargeysa(HLN);-Waxaan wali higrelin kulan uu Baarlamaanka Soomaaliya uu ka yeelan lahaa labo ajande oo iska soo horjeeda
oo ay kala wateen guddoomiyaha iyo kuxigeenkiisa koowaad oo lagu waday in lagu qabto dhismaha guriga ummadda ee magaalada Muqdisho.
Buuq iyo sawaxan ayaa hadheeyay hoolka ay ku shirayeen xildhibaanada oo aroortii hore ay soo xaadireen tobannaan xildhibaan balse markii dambe la diiday in xildhibaano kale soo galaan.
Waa taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed Janaraal Bashiir Cabdi Maxamad oo ku eedeynaya gudoomiye Jawaari iyo ku-xigeenkiisa koowaad Mahad Cabdalla Cawad inay ciidan lasoo galeen dhismaha baarlamanka.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa Salaasadii sheegay in dadaalladii lagu doonayay in lagu xaliyo khilaafka siyaasadeed ee ka taagan baarlamaanka ay guul darreysteen.
Jawaari oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho shalay ayaa sheegay inuu ku gacan seydhay dalab loo soo jeediyay oo ahaa inuu is casilo.
''Aad baa la iiga gar daran yahay in la i weydiiyo inaan is casilo, annigu sharci baan ku imid, sharci uun ayaana ku bixi karaa,'' ayuu yidhi Jawaari.
Xafiiska madaxweynaha wali kama uusan hadal eedeyntan u dambeysay ee ka soo yeedhay Jawaari.
Mar sii horreysay gudoomiye kuxigeenka Koowaad Cabdiwali Ibrahim Sheekh Muudey waxa uu shaqo joojin ku soo rogay xogeeyaha guud ee Baarlamanka Cabdikariim Xaaji Cabdi Buux, haseyeeshee isla shalay waxa warqadaasi ku gacan saydhay gudoomiye Jawaari oo ku tilmaamay shaqo joojintaasi mid aan sharciyad haysan, wuxuna ku amray xogeeyaha guud inuu shaqadiisa sii wato.